Maxaad ka taqaan siyaasiyiinta ka tirsan xisbiga Trump ee doonaya inay xilka kala wareegaan? | Biyoguurenews.com
Home Wararka Maxaad ka taqaan siyaasiyiinta ka tirsan xisbiga Trump ee doonaya inay xilka...
Maxaad ka taqaan siyaasiyiinta ka tirsan xisbiga Trump ee doonaya inay xilka kala wareegaan?
Joe Walsh, oo horay u ahaa xildhibaan, haddana soo tabiya barnaamij ka baxa raadiyaha ayaa noqday ninkii labaad ee usoo istaaga inuu madaxweyne Trump loollan ku galiyo xisbiga jamhuuriga gudihiisa.
Siyaasigan ku dhawaaqay inuu damacsan yahay musharraxnimada madaxweynaha ayaa doonaya inuu Donald Trump kula hardamo soo magacaabista musharraxnimada xisbiga talada haya ee dhici doonta sanadka 2020-ka.
Labada xisbi ee ugu waawyeyn Mareykanka, ee kala ah Jamhuuriga iyo Dimuqraaddiga ayaa marka ay doorashada soo dhawaato kala xulan doona shakhsiyaadka doonaya inay u tartamaan jagada ugu sarreysa dalka.
Sidee loo noqon karaa Madaxweynaha Maraykanka?
Ololaha doorashada Mareykanka oo weji cusub yeeshay
Iyadoo la ogyahay in Trump uu sugayo siyaasiga xisbiga mucaaradka ee lasoo ansixin doono, ayaa haddana waxaa laga doonayaa inuu kasoo guuleysto siyaasiyiin isla xisbigiisa gudihiisa jagadaas ugu ciriirinaya.
“Waddanku wuxuu u xanuunsan yahay ficillada uu sameeyay ninkan, waa ciyaal”, sidaas waxaa yiri Mr Walsh, oo ay da’diisu tahay 57 sano, mar uu isbuucan la hadlayay warbaahinta ABC.
Hadalkaas ayaa loo arkaa inuu yahay madfac xoog badan oo uu ku riday Mr Tump.
Ma jirto wax jawaab ah oo uu madaxweyne Trump arrintan ka bixiyay ilaa hadda.
Mr Walsh ma aha qofka kaliya ee u faruuryo qaniinsanaya sidii uu booska uga wareejin lahaa Mr Trump, inta aan xilliga doorashada la gaarin.
Barasaabkii hore ee gobolka Massachusetts Bill Weld, oo isla xisbiga Jamhuuriga ka tirsan ayaa bishii Abriil ku dhawaaqay inuu loollan galin doono Donald Trump.
Labada ninba waxay wajihi doonaan dagaal iyaga qudhooda ku dhex mara qaadashada booska Trump, waxayna doonayaan in madaxweynaha aan mar labaad loo oggolaanin inuu xilka u tartamo.
Hase ahaatee, taariikhda casriga ah ee Mareykanka, ma jiro madaxweyne xilka haya oo ay ka guuleysteen siyaasiyiin kasoo ifbaxay isla xisbiga uu ka tirsan yahay.
Jimmy Carter, oo madaxweyne ahaa sanadkii 1980-kii iyo George Bush Snr, oo madaxweyne ahaa sanadkii 1992-kii ayaa la kulmay loollan adag oo ay ku sigteen inay waayaan soo magacaabista musharraxnimada xisbigooda gudihiisa.
Maxaa kale oo uu yiri Joe Walsh?
“Xilka inaan u tartamo ayaan rabaa, sababtoo ah isagu uma qalmo – ma jiro qof doonaya inuu isxilqaamo, sidaas darteedna waa in la helo waddo kale”, ayuu ku yiri warbaahinta ABC.
Mr Walsh ayaa kursiga aqalka wakiillada loo doortay sanadkii 2011-kii, xilligaasna wuxuu ka tirsanaa dhaqdhaqaaqa Tea Party.
Tea Party waa garab siyaasadeed oo asal raac ah, oo ka tirsan isla xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareylkanka.
Yaa Trump kula loollami doona doorashada 2020?
Maalinta ay dhaceyso doorashada xigta ee madaxweynaha Mareykanka waxaa hadda ka harsan muddo 1 sano ah, laakiin tartanka dhinaca xisbiga Dimuqraaddiga ee loogu jiro qofkii wajihi lahaa Trump ayaa horayba u billowday.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden iyo Bernie Sanders oo horay isugu dayay loollanka xilka madaxweynaha, ayaa goor sii horreysayba sheegay inay diyaar u yihiin dagaalka siyaasadeed ee doorashada lagula galayo madaxweyne Trump.
Siyaasiyiinta kale ee safka ku jira ayaa ah kuwo aan si weyn loo aqoonin.
Previous articleDaawo Siyaasi ramaax o Si Adag Uga hadlay Arinta Taliyaha Ciidanka Somalilandil iyo hadalkii u jeediyay
Next articleMadaarka Hargeysa Oo Maanta Laga Ceydhiyey Shaqaale Ka Badan 40 Qof Iyo Sababta